Manje ukuphila ngokuya flavorings ukudla esetshenziswa. Ngokuvamile, basuke asetshenziswa ukudla ezifana isinkwa, amasosishi ushizi nebhotela. Nokho, zikhona izimo lapho flavour atholakala izimboni ze-non-ukudla (isibonelo, embonini yezimoto), amakhemikhali yasendlini, izimonyo (amashampu, okhilimu noma umuthi wokuxubha). Kungani ekuqaleni kwalesi sihloko, saqala ukukhuluma mayelana flavour? Phela lezi zingxenye njengoba eziyisisekelo usebenzisa ukukhiqizwa liquid ugwayi electronic.
Izingxenye ezisemqoka aqukethe uhleloxhumano uketshezi for ugwayi electronic womshini Russian - propylene glycol, glycerine, amanzi distilled, flavour ukudla i-nicotine.
Konke lokhu izakhi kabanzi kokubili ukudla embonini kumthengi. Ake ukugxila ezinye zazo.
Propylene glycol kuyinto kungekho nto enemibala emihle, uketshezi viscous nge kunalokho ebuthakathaka, iphunga cishe imperceptible futhi bumnandi. Ngenxa yalokho, izifundo zesayensi baye babonisa ukuthi kumakhemikhali okungezona ezinobuthi futhi ukuhogela ithuba lakhe ngaphakathi akakubangeli ubuthi. Imboni yokudla isebenzisa propilenlikol njengoba humectant, emollient kanye ejenti zimhlakazile.
Glycerin futhi ibhekwa njengengxenye yokudla okunempilo, okuyinto kuvunyelwe kwamanye amazwe. Le ngxenye ingase ihlanganise iqembu isimame. It has impahla ukuze kulondolozwe futhi ukwandisa degree of viscosity imikhiqizo ehlukahlukene ukudla.
Imboni yokudla iye yathola ukusetshenziswa njengoba emulsifier, usebenzisa okuyinto kungenzeka uhlanganise izinto ezahlukene. Glycerol kwaba zonke izinhlobo zocwaningo, imiphumela eyabonakala harmlessness yayo abantu.
Ukukhiqizwa liquid ugwayi electronic ayikwazi ikhiphe ngamanzi distilled. akufanele aqukethe engahluziwe.
Ukukhiqizwa liquid e-ugwayi njengebhizinisi
Inqubo ukukhiqizwa kuncike hlobo yayo. Lokhu sulfation, desulfation futhi ekstranirovanie. On endaweni Russian Federation bamelela imibuso ababaningi kwezomnotho okwenziwa kubhekwe. Nokho, kakade iqoshwe yizinkampani ezimbalwa besebenzisa Brands angaphandle futhi wahlanganyela emsebenzini wokukhiqiza liquid ugwayi electronic (Petersburg, isibonelo).
Ukuze womshini uketshezi enjalo ngokuyinhloko asetshenziswa izingxenye izinga German ngezinga eliphezulu zokuhlanjululwa. Kulezi amabhizinisi yasekhaya, ngaphezu ukukhiqizwa ngokwaso, futhi laboratory evumela ukuhlangabezana ngempumelelo futhi ngokushesha izidingo okhulayo Russian emakethe. Sihlala njalo sisebenzela phezu ekwandiseni uhla ukukhethwa the best ukunambitheka izingxenye ukubhema labo abanamathela electronic.
Indlela yokuqala ivumela ukwenziwa liquid ugwayi electronic ukuthi, kuyinto sulphation. Kulokhu, lo ugwayi imibengo baphathwe sulfuric acid. Ngaphezu kwalokho sulphate-nicotine siyochithwa emanzini, ukuhlunga kanye shabalala ukuba lokuhlushwa ezithile isixazululo ayegcwele (40%). Naphezu kweqiniso lokuthi lolu hlobo ukukhiqizwa kwenza kube nokwenzeka ukuba uthole umkhiqizo osuphelile ngaphezu kwanoma yimuphi omunye indlela (lokhu kuchaza izindleko zalo ongaphakeme), it libhekene ukungcola. Ngamanye amazwi, uketshezi for electronic ugwayi womshini ivumela ukuthola uhlobo izinto eziphilayo okuyinto "angqongqa" sulfuric acid.
Le ndlela yesibili, okuyinto nokonakala kulandele omiswe nqabela. ukukhiqizwa okunjalo uketshezi for ugwayi elekthronikhi eRussia Kwenziwa usebenzisa propylene glycol futhi glycerol nezinye alcohols polyhydric ukuthi kungenziwa oncibilikiswe amanzi futhi abanye-nicotine ngokwezinga zilulaza. Kulokhu, i-nicotine ikhiqizwa bube manikiniki ugwayi. Kumele ngenkathi kushiswa okuthile kuhovini glycerol noma propylene glycol. Isixazululo wafakwa elicwengekileyo futhi ixhuma amanzi. Ngakho-ke kufanele ukwakha isixazululo aqueous nge okuqukethwe nicotine kanye glycerin.
Nokho, lesi sisombululo in uketshezi yokukhiqiza ugwayi elekthronikhi hhayi ifomu okuhlanzekile, njengoba kungase kube yingozi empilweni yomuntu. Lokhu kuvezwa obala okuqukethwe engaphezu kuka-2.5%, i-nicotine ku ahwamukayo umhwamuko, ukuze ngisho nomoya ezimbalwa le umusi kungaholela ekufeni yomuntu.
Ukuze wenze ikhambi elinjalo ezifanele ukusetshenziswa, kumele freezout-nicotine. Kuphela ngale ndlela uketshezi ukukhiqizwa for ugwayi electronic (ibhizinisi) ivumela ukuthola isixazululo equkethe 0.5% amanzi 99,5% kagwayi. Intengo izindleko zalolu hlobo nicotine kuqhathaniswa eliphezulu futhi kulingana US $ 350 kilogram per.
Ngenxa kahle ongaphakeme bokukhiqiza nicotine inqubo nokonakala lohlanganisiwe wathola indlela okwandile eyaziwa ngokuthi "desulphation". ukukhiqizwa okunjalo kuhilela isizinda nicotine kusuka bube manikiniki ugwayi esebenzisa glycerol, kanye nekhambi isivele etholwe sulfation. Prakthiza selukhombisile ukuthi 1 ha ugwayi kungenziwa ezivezwa indlela Ukuqedwa mayelana 180 kg nicotine, bese kuba ngolunye, inombolo efanayo akhishwa ngokusebenzisa indlela desulfation.
Ukuqhathanisa okungenhla izinhlobo ukukhiqizwa, kufanele kuphawulwe ukuthi eliphezulu kakhulu nicotine etholakala ngokuzikhandla indlela isizinda. Kulokhu, ingxenye esebenzayo yakhiwa ayimbijana ukungcola, okuyinto Ilungiselelwe ngesikhathi ukukhiqizwa kwethonya sulfuric acid.
Nokho, ngisho nabakhiqizi okudingeka usebenzele kuzo izinga nicotine, ngoba ku isizinda ugwayi ishidi equkethwe semali ugwayi alkaloid, lingabulewe futhi ababhubhise cholinesterase e abantu i-nicotine. Ngamanye amazwi, nge enjalo ukungenisa i-nicotine imizuzu 30 ke zingadilizwa nengxenye, okubangela isifiso ngiphinde ngibheme. Ngesikhathi alkaloids efanayo emzimbeni kungukuthi babhujiswe futhi ingaboniswa okuningi kancane, okuholela abaningi abasuka nge break ngalinye.
Efingqa impahla, kufanele kuphawulwe ukuthi ngibhema electronic kuyindlela enhle ukuba ukubhema evamile. Ngakho-ke, ukwenziwa uketshezi for nozakwabo electronic ezifana impela elichumayo.
Ceres - iplanethi noma netshe elisemkhathini? ukubaluleka aphathelene nezinganekwane futhi izinkanyezi
Tagetes undersized - impahla esihle kakhulu amalungiselelo flower
Amahhotela Dating Abesifazane Russian ngasoLwandle
Brand Positioning: Izici yentuthuko
M. I. Glinka. Umlando Omfushane umqambi
Nojosaka "Polar" zesikole
Roca - ukucwila nganoma yisiphi yokugezela